Tijaabinta Uurka kahor Columbus, OH | Caafimaadka PW
Tijaabinta Uurka kahor Columbus, OH
Tijaabinta joogtada ah
Dhammaan haweenka uurka leh waxay maraan baytari baaritaanno ah uurka horraantiisa. Tijaabooyinkaan waxaa ka mid ah baaritaanka dhiigga (tirinta dhiigga, nooca dhiigga, difaaca rubella, cagaarshowga, iyo baaritaanka gobolka looga baahan yahay waraabowga), dhaqanka kaadi, baaritaanka Pap, dhaqanka afka ilmo-galeenka ee jabtada iyo dhaqanka kalamiidiya.
Haweenka Rh-negative waxaa laga baaraa unugyada difaaca jirka ee RH qiyaastii 28 usbuuc oo uur ah waxayna helaan cirbadeynta RhoGam. Waxaan si joogto ah u baarnaa sonkorowga uurka 28 toddobaad. Waxaan bixinaa baaritaanka borotiinka dhiigga ee loo yaqaan 'alpha-fetal protein protein' (AFP) ee toddobaadyada 16-18, kaasoo baaraya madaxa iyo cilladaha laf-dhabarka iyo cilladda Down's syndrome.
Waxaa lagu weydiin karaa inaad yeelato ultrasound, sidoo kale loo yaqaan echogram ama sonogram. Sababta ugu badan ee loo yaqaan 'ultrasound scan' ayaa ah in laga bilaabo taariikhda uurka, maadaama taariikhaha caadada laga yaabo in aan lagu kalsoonaan karin ilaa 40 boqolkiiba dhammaan haweenka uurka leh.
Aad ayey muhiim u tahay in la helo qiyaas sax ah taariikhda dhalashadaada sababo dhowr ah awgood. Haddii ay tahay inaad horumariso dhibaatooyin, maaraynta dhibaatadaadu waxay aad ugu tiirsan tahay da'da uurkaaga. Markii hore ee uurka waxaa la sameeyaa iskaanka 'ultrasound scan', kan saxda ah ayaa loogu talagalay shukaansiga.
Baadhitaanada Ultrasound ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu ogaado uurjiifyo badan, si loo helo noocyo badan (laakiin aan ahayn dhammaantood) noocyada cilladaha lagu dhasho, si loo ogaado sababaha keena dhiig baxa siilka, iyo in la ogaado dib u dhaca ku yimaadda koritaanka uurjiifka. Dhammaan bukaanada halista badan waa in iskaanka la mariyaa ugu yaraan hal mar, mararka qaarkoodna taxane ahaan, inta ay uurka leeyihiin. Bukaannada badankood waxaa lagu qanciyaa markay arkaan ilmahooda aan weli dhalan oo u dhaqaaqaya shaashadda 'ultrasound shaashadda', daraasadaha hordhaca ah qaarkoodna waxay muujinayaan in baaritaanka 'ultrasound scans' uu gacan ka geysan karo bilaabidda nidaamka isku xirnaanta xitaa dhalashada ka hor.
Xirfadlayaasha caafimaadka dumarka waxay bixiyaan baaritaan hidde ah oo aan faafin oo sidoo kale loo yaqaan DNA-da uurjiifka unuga la'aan. Fursadaha baaritaanka hidda-sidaha sida CVS ama amniocentesis ayaa laga heli karaa Daawada Uurka ee Hooyada.
Xogta Biophysical iyo / ama Tijaabooyinka uurjiifka
Haddii aad leedahay dhibaatooyin qaarkood oo uur ah, ama haddii aad ugu yaraan hal toddobaad dhaafto, waxaad mari doontaa tijaabooyinkan fudud ee aan fallaadhinta ahayn hal mar ama laba jeer toddobaad kasta inta lagu jiro qaybta dambe ee uurkaaga. Tijaabooyinkaan looma isticmaalo uurka caadiga ah, ee aan isku murgsaneyn.
Imtixaanka dhalmada ka hor FAQs
Dhammaan haweenka uurka leh ma maraan baaritaanka dhalmada ka hor?
Qaar ka mid ah haweenka uurka leh ayaa doorta in aan la marin baaritaanka dhalmada ka hor, laakiin waxaa lagu talinayaa xaalado badan. OB/GYNs ayaa laga yaabaa inay rabaan inay tijaabiyaan arrimaha sida sonkorowga uurka, cilladaha madaxa iyo laf dhabarta, iyo xaaladaha sida xanuunka iinta ee Down's syndrome. Hadafkayagu waa inaan hubinno in uurkaagu uu caafimaad qabo oo badbaado leh intii suurtogal ah.
Baaritaanada dhalmada ka hor ma badbaado yihiin?
Inta badan baaritaanada dhalmada ka hor waxaa loo arkaa inay aad ammaan u yihiin marka uu sameeyo xirfadle tababaran. Tijaabooyinka dhiigga, dhaqamada kaadida, Pap smears, iyo dhaqamada afka ilmo-galeenka ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ayaa ah kuwa ugu yar oo khatartooda leh. Sababtoo ah tignoolajiyada ultrasound waxay isticmaashaa hirarka dhawaaqa halkii ay ka isticmaali lahayd shucaaca, waxaa loo arkaa inay ka ammaan badan tahay raajooyinka.
Waa imisa qiimaha baaritaanka dhalmada ka hor?
Bukaan-socodka waa in ay kala hadlaan bixiyaha caymiska wixii ku saabsan caymiska baaritaanka dhalmada ka hor. Shirkadaha qaarkood waxay dabooli doonaan kharashka ilaa xad. Wadarta kharashka imtixaanada dhalmada ka hor way kala duwan yihiin iyadoo lagu salaynayo dhawr arrimood, laakiin kooxdayada maamulka ee Columbus, Westerville, iyo Dublin, OH, waxay sameeyaan wax kasta oo aan kari karno si aan u hubinno in daryeelkaaga la heli karo oo la awoodi karo.